जीवनशैली Archives - Page2of 60 - Purbeli News
भाग्यमानी हुन्छन ति मान्छे जसलाई एक मुखी रुद्राक्षको दर्शन हुन्छ – जान्नुहोस् यसको चमत्कार रुद्राक्षको नाम र त्यसको उपयोग एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐ...
भ्यालेन्टाइन प्रेम दिवश हो । प्रेम दिवश भएरै पनि घिणाका अनगिन्ति घटनाक्रमहरु यहि प्रेम दिवशमै घटेका पाँइन्छन् । घिणाका घटनाहरुले अपराधिक स्वरुप लिएका पनि धेरै विश्व चर्चित अपराधहरु छन् । हेरौँ सन्सारका छ भ्यालेन्टाइन दिवशमा घटेका अपराध ऋङ्खलाहरु…… ६. हार्टफोर्ट विश्वविद्यालयमा मास्टर्स गर्दै गरेकि तिआना नोटिस नामकि युवतिलाइ उनका भुपु प्रेमिले १८...
प्रणय दिवस वा प्रेम दिवस (Valentine’s Day) १४ फेब्रुअरीमा विश्वभर मनाइने दिवस हो। यो पर्व पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको वलिदानसँग सम्बन्धित छ। तत्कालीन रोमन सम्राट् क्लाउडियस द्वितीयले युवाहरू प्रेम र विवाहतिर लागे सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर भ्यालेन्टान भने सम्राट्को निर्णयलाई धर्मविरुद्ध भन्थे। उनको बुझा...
बालबालिकालाई राम्रो बोली सिकाउन अपनाउनुहाेस् यी टिप्स
काठमाडौ । सन्तान जन्मेपछि अभिभावकहरूमा उनीहरूको बोली कस्तो होला भनेर सोच आउने गर्छ । केही शिशुहरू चाँडो बोल्छन् भने कोही ढिलो बोल्ने हुन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बच्चालाई बोल्न सिक्नका लागि कम्तिमा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । बोल्न नसकेसम्म शिशुहरूले इसारामार्फत आफ्नो शब्दहरू बताउन् खोज्छन् । केही शिशुहरूको विकास ढिलो हुन्छ, त्यसैले उनीहरू ...
काठमाडौ । सकारात्मक ऊर्जाको हामी सबैलाई आवश्यकता हुन्छ। आफ्नो आसपासमा सकारात्कमता बनाइराख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जीको माहोल बन्न सकोस् अनि सबै नकारात्मक ऊर्जा हामीबाट टाढा जाओस्। सकारात्मक ऊर्जाका लागि केही केही बिरुवाले पनि साथ दिने गर्छन्। हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बो...
काठमाडौ । हाम्रो जन्म कसरी भयो त भन्ने सत्यतामा एकछिन सोच्ने हो भने पक्कै सृष्टिकर्ताको खोजीमा घोत्लिन्छौ । तर यो अहिलेसम्मको अनुत्तरित प्रश्न हो । यसमा धेरै नजाऔँ । तर हामी केही कुरामा विश्वास गर्न बाध्य छौ ती कुराहरुको बारेमा केही उल्लेख गरौँ । सपना धेरै मानिसले देख्छन् । निधाएको बेला फिल्मजस्तै आउँनु र स्मरणमा रहनुलाई सपना भनिन्छ । कहिले कल्प...
काठमाडौं । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ...
काठमाडौं । माछामासुरहित आहार गर्दा मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुने भए पनि मस्तिष्काघातको जोखिम बढ्ने एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनमा ४८ हजार व्यक्तिलाई १८ वर्षसम्म हेरिएको थियो । प्रत्येक हजार मानिसहमध्ये मुटुको रोग लाग्ने शाकाहारीको संख्या मांसाहारीको भन्दा ...
एजेन्सी / के तपाईं घरको जेठो सन्तान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईं लागि खुसीको खबर छ । केही समय अघि मात्र गरिएको अध्ययन अनुसार, कुनैपनि परिवारको जेठो सन्तान हुनुका फाइदा धेरै छन् । जर्मनस्थित लिपजिग युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययन अनुसार, परिवारको सबैभन्दा जेठो सन्तान अन्य भन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक हुन्छ । अनुसन्धान प्रतिवेद...
काठमाडौँ । हिन्दू धर्ममा धानचामलको विशेष महत्त्व छ । नामकरण संस्कारदेखि लिएर अन्तिम संस्कारसम्म चामलको उपयोग हुन्छ । चामलसँग सम्बन्धित केही उपाय यस्ता छन् जसले तपाईंका सबै समस्या हटाउँछन् । कुनै पनि शुभ मुहूर्त वा पूर्णिमाको अवसरमा बिहान छिटो उठेर नुहाइधुवाइ गरेर बेसार वा केसरले चामलका दाना रंगाउनुस् । चामलको दाना सग्लो हुनुपर्छ । त्यसपछि ती दान...